यी ५ चर्चित मोडल जो पुरुषबाट महिला बनेका थिए — Imandarmedia.com
१एकसाथ एकै परिवारका ८ जनाकाे मृत्यु भएपछि शोकमा डुब्याे स्याङ्जा ?
२थप १४९७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
३काठमाडाैं सहित देशभर बिजुली जान थालेपछि ऊर्जामन्त्री पुनले चाले यस्तो कदम, होला त समस्या समाधान ?
४२ हजार ६ सय मेगावाटका आयोजनाहरूको काम नरोकिने
५नेपाल-चीन सीमाबारे स्थलगत रिपोर्ट नआउँदै सरकारले हतारमा टिप्पणी गर्‍यो : कांग्रेस
६यस्तो गाउँ, जहाँ मठ मन्दिरमा चमेराको पूजा हुन्छ ?
७दोस्रो चरणको लकडाउन पहिलेजस्तो कडा नहुने, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु खुल्ने
८पहिरोमा पुरिएर स्याङ्जामा ९ जनाको मृत्यु, नामावलीसहित
९देशभर निरन्तर पानी परिरहेका बेला मौसमसम्बन्धि आयो अर्को नयाँ अपडेट, हेर्नुहोस बिस्तृत विवरणसहित
१०नेपालीहरुका लागि विश्वभरबाट आयो यस्तो खुसीको खबर, थमिएनन् धेरैका आँशु, सलाम यी मजदुरलाई
११चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको बिषयमा ओली सरकारले मुख खाेल्याे, यस्ताे रहेछ वास्तविकता
१२लामो दुरीको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? यातायात विभागकाे अपिल अनिवार्य पढ्नुहाेस
१युवराज खतिवडाले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि कुलमानले निकाले यस्तो कडा बिज्ञप्ति, कसलाई के भने ?
२स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिदै, प्रेसमिट गरेर थप जानकारी गराइने
३बाहिरियो ठिमी ह’त्या का’ण्डका मृतक तीनै जनाकाे पो’ष्ट’मा’र्टम रिपोर्ट, केछ रिपाेर्टमा
४देशै हल्लिने गरी फेरी गयाे ६.३ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प, कहाँ हाे केन्द्रविन्दु ?
५आजैदेखि लागु हुनेगरी ओली सरकारले गर्यो फेरि यस्तो निर्णय, जनता झनै मारमा पर्ने निश्चित
६काेराेनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, किन भने यस्तो ?
७गृहमन्त्री बादलसहितको टोली लिएर बागलुङ उडेको हेलिकोप्टर अन्तै पुग्यो, कहाँ केछ अवस्था ?
८कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति नदिइएकाेबारे ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा के भने
९अन्तत: ओली सरकारले तीन वर्षपछि हटाइयो प्रतिबन्ध, हेर्नुहोस पत्रसहित
१०नेपालमा फेरी भूकम्पको शक्तिशाली धक्का, मान्छेहरूको भागाभाग, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु ?
११कुलमानपछि को बन्दैछ विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख ? ऊर्जमन्त्री पुनका प्रेस सल्लाहकारले खोले यस्तो रहस्य
१२मोदीमाथि फेरी आइलाग्यो यस्तो तनाव, जनताले बहिस्कार गरेपछि देशभर हंगामा, किन भयो यस्तो ?
यी ५ चर्चित मोडल जो पुरुषबाट महिला बनेका थिए
एजेन्सी । भारत र नेपाल लगायतका देशमा समलिङ्गीहरुको अवस्था राम्रो भएको छ । केही वर्ष अगाडि ट्रान्सजेन्डरहरुलाई हेर्ने नजर र अहिलेको उनीहरुको अवस्थामा निकै फरक पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिङ्गीको स्थान दिएपछि उनीहरु खुलेआम बाहिर आउन थालेका छन् । यसैबीच, केही यस्ता चर्चित मोडलहरु छन् जसले ग्ल्यामरस दुनियाँमा निकै चर्चा पाइरहेको छ ।
बलिउडमा बबी डार्लिङको नामले परिचित यी मोडल पंकज शर्माबाट बबी बनेकी थिइन् । उनको जन्म केटाको रुपमा भएको थियो । त्यसैले परिवारले उनको नाम पंकज राखिदिएको थियो । यद्यपि उनले २०१० स्तन ट्रान्सप्लान्ट गरिन् र आफ्नो नाम पाखी राखिन् । केही समयपछि उनी बबी डार्लिङको नामले चिनिन थालिन् । उनले ‘क्या कुल है हम’, ‘पेज ३’, ‘हंसी तो फंसी’ जस्ता फिल्ममा काम गरिसकेकी छिन् ।
बलिउडमा गौरी अरोडको नामले चिनिएकी यी मोडल लिङ्ग परिवर्तन गर्नुअघि गौरव अरोडा थिइन् । युवककै रुपमा उनले स्पिलिट्सभिला–८ मा प्रतिस्पर्धीको रुपमा रहेका थिए । उनले लिङ्ग परिवर्तन गरेका कारण निकै चर्चा समेत पाएका थिए । गौरव निकै ह्याण्डसम युवक थिए । तर गौरी बनेपछि पनि उनी निकै सुन्दर युवती बनिन् । एक अन्तवार्तामा उनले आफूलाई बच्चा बेलादेखि नै केटी हुन मन पराउने बताएकी थिइन् ।
निक्कीले पनि केटाको रुपमा जन्म लिएकी थिइन् । उनी युवतीका कपडाहरु लगाउन निकै रुचाउँथिन् । तर, उनको परिवार निकै कडा भएकाले उनका लागि यो सम्भब हुने निकै मुश्किल थियो । अन्ततः उनले परिवारको विरुद्ध गएर २००९ मा लिङ्ग परिवर्तन गराइन् ।
ब्रिटिस इन्डियन मोडल शिनाता सांघाले पनि लिङ्ग परिवर्तन गराएकी हुन् । उनी दक्षिण एसियाकी चर्चित ट्रान्सजेन्डर मोडल हुन् । ट्रान्सजेन्डर कम्युनिटीद्वारा आह्वान गरिएको ब्युटी पेजेन्ट्समा समेत उनले भाग लिइसकेकी छिन् । उनी मिस ग्ल्यामर क्वीन युनाइटेड किङडम पनि बनिसकेकी छिन् ।
नेपालको नुवाकोटमा जन्मिएकी अन्जली लामा नबिन वाइबाको रुपमा जन्मिएकी थिइन् । उनले शल्यक्रियाबाट आफूलाई अन्जली लामाको रुप दिइन् । परिवार उनको विरुद्धमा हुँदाहुँदै पनि उनले आफूलाई अन्जली बनाएरै छोडिन् । उनी सफल मोडलको रुपमा चर्चित भएकी छिन् ।
विचार-ब्लग सँग सम्बन्धित
एमसिसी यस अर्थमा राष्ट्रघाति छ
क्रान्ति हुने कुरा पनि हो, गर्ने कुरा पनि हो
ओलीको नौटङ्की, यान्छीको दौड र प्रचण्डको छप्ल्याङ
युग बदल्ने विप्लवका ‘सपनाका यात्रीहरू’
कृषि क्रान्ति: मिठो सपना, तितो यथार्थ
कोरोनाले यसरी खोलिदिएको छ पुँजीवादको सार चरित्र
रफुकारकाे कथा र केपी ओली
प्रतिबन्ध, कोरोना कहर र मजदुर दिवस
कोरोना, ओलीको बाँसुरी र जलिरहेको देश
नेपालको ६० हजार हेक्टर जमिन भारतले फिर्ता गर्नैपर्छ